Vaovao - Ny toetra sy ny fampiasana ny mombamomba ny alimina indostrialy
1. Misy famaritana sy habe isan-karazany, ary ny haben'ny sisiny lava sy ny lafiny fohy dia maro an'isa. Ohatra, ny 4040, 4080, 40120, 4040 iraisanay dia toradroa, ny lafiny efatra dia 40mm, ary 4080 ny lafiny lava 80mm. Ny lafiny fohy dia 40mm, ary ny lafiny lava dia indroa ny lafiny fohy. Mazava ho azy fa misy ihany koa ireo manokana, toy ny 4060, ny lafiny lava dia 1,5 heny noho ny lafiny fohy.
2. Tsy misy afa-tsy ny sakan'ny slot roa, 8mm ary 10mm. Na dia misy famaritana an-jatony maro ho an'ny mombamomba ny aliminier indostrialy aza dia ireo habeny roa ireo ihany ny lohan'izy ireo, indrindra fa kely, ohatra, ny slot 2020 dia 6mm. Ity dia ny fampiasana kojakoja mahazatra. Fantatsika fa ny mombamomba ny alimina indostrialy dia matetika mifandray amin'ny bolt sy ny zorony, ary ireo kojakoja ireo dia voafaritra matetika, noho izany ny fivorian'ny kojakoja dia tokony hojerena rehefa mamolavola profil aluminium.
3. Misy karazany roa ny fenitra nasionaly sy fenitra eropeana. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny mombamomba ny aliminioma manara-penitra Eraopeana sy ny mombamomba ny alim-pirenena mahazatra dia eo amin'ny laharam-pahamehana ihany koa. Ny fenitra Eoropeana dia alika trapezoidal misy lehibe ambony sy kely kokoa. Ny làlam-pirenena mahazatra dia zoro mahitsizoro, mitovy amin'ny ambony sy ambany. Ireo mpampifandray ampiasaina amin'ny fenitra nasionaly sy ny fenitra eropeana dia samy hafa. Heveriko manokana fa ny mombamomba ny aliminioma indostrialy mahazatra dia tsara kokoa. Ny fenitra eropeana dia manana famaritana betsaka kokoa noho ny fenitra nasionaly. Misy ihany koa ny mombamomba ny alimina indostrialy tsy manara-penitra namboarina, izay azo ampiasaina miaraka amin'ireo mpampitohy manara-penitra Eraopeana na ireo mpampitohy mahazatra nasionaly.
4. Ny hatevin'ny rindrin'ny profil aluminium indostrialy dia tsy ho manify loatra. Tsy toy ny mombamomba ny aliminiôna maritrano, ny haingon-trano aliminijika indostrialy dia mitana andraikitra haingon-trano fotsiny, ary ny hatevin'ny rindrina dia ho manify. Ny mombamomba ny aliminioma indostrialy amin'ny ankapobeny dia mitana andraikitra manohana ary mitaky fahaiza-mitondra entana, ka tsy tokony ho manify loatra ny hatevin'ny rindrina.
Ny mombamomba ny alimina indostrialy dia fitaovana firaka, izay manana fampiasa betsaka ary malaza kokoa amin'ny tsena ankehitriny. Noho ny fahaizany mandoko tsara, ny simika sy ny toetra ara-batana tsara, dia manolo tsikelikely fitaovana vy hafa izy io ary lasa fitaovana ampiasaina amin'ny indostria maro.
Amin'ny ankapobeny, ny piraofilina alimina indostrialy dia mombamomba ny aliminiana afa-tsy ny varavarana sy ny varavarankely, ny alim-baravarankon'ny rindrina, ary ny mombamomba ny alimo. Ohatra, ny sasany fitaterana an-dalamby, vatan'ny fiara, famokarana ary alimo velona dia azo antsoina hoe profil aliminiôna indostrialy. Amin'ny lafiny tery, ny mombamomba ny alimina indostrialy dia ny mombamomba ny alim-piangonana, izay mombamomba ny hazo fijaliana vita amin'ny tsorakazo alim-pito izay natsofoka ary natsofoka tao anaty maty mba hamoahana azy.
Ity karazana mombamomba ity dia antsoina koa hoe profil extrusion aluminium, piraofilina aliminioma indostrialy. Izy io dia manana fampiasana maro karazana ary azo ampiasaina amin'ny indostria maro. Fampiasana mahazatra dia ny fanaovana fitoeran-jiro isan-karazany, fonosana miaro fitaovana, fanohanan'ny tsanganana lehibe, fehikibo conveyor fikaonan-doha, fefy masinina saron-tava, dispensera ary taolana hafa. Ity misy fampidiran-dresaka fohy momba ny fampiasana ny mombamomba ny alimina indostrialy amin'ny lafiny tery, toy izao manaraka izao:
1. Fitaovana vita amin'ny aliminioma, endriny aluminium
2. Assembly line workbench skeleton, fehikibo conveyor tsipika fanohanana, atrikasa workbench
3. Fiarovan'ny fiarovana amin'ny atrikasa, fonony miaro fitaovana lehibe, efijery maivana ary efijery azo antoka
4. Sehatra fikojakojana lehibe sy tohatra fiakarana
5. Fitaovana fitsaboana
6. Fametahana fametahana Photovoltaic
7. Fametahana simulator fiara
8. Talantalana isan-karazany, talantalana, fitoeran-materialy amin'ny efitrano fambolena marobe
9. Sarety fiovan'ny fitaovana atrikasa, sarety fitaovana mombamomba ny aliminioma
10. Fampirantiana fampirantiana marobe, takelaka fampirantiana fampahalalana amin'ny atrikasa, talantalana fotsy
11. efitrano Masoandro, trano heva madio
Ho fanampin'ireo fampiasana mahazatra efa voalaza etsy ambony, dia azo amboarina amin'ny rafitry ny vokatra isan-karazany. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny mampiasa azy isaky ny tianao. Marihina fa maro ny famaritana ny mombamomba ny aliminioma indostrialy, ary afaka misafidy fitaovana mifanaraka amin'ny filanao manokana ianao rehefa misafidy. Izy rehetra dia mifamatotra amin'ny kojakoja mifangaro alimina, izay azo antoka sy marin-toerana ary mora esorina.